National Power News:: संसद् पूनःस्थापना भए प्रचण्ड र माधवजी हल बाँधेर अन्तिममा मैकहाँ आइपुग्न बेर लगाउनुहुन्न : प्रधानमन्त्री ओली National Power News:: संसद् पूनःस्थापना भए प्रचण्ड र माधवजी हल बाँधेर अन्तिममा मैकहाँ आइपुग्न बेर लगाउनुहुन्न : प्रधानमन्त्री ओली
Tuesday, February 23, 2021 National Power
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना नहुने ठोकुवा गरेका छन् तर, केहीगरी पूनःस्थापना भइहाले प्रचण्ड र माधव नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न निस्कने टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार आफू निकट युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दैं उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरु जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार रहेको भन्दै संसद पूनःस्थापना भएपनि केही फरक नपर्ने खालको अभिव्यक्ति दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्छु भन्दा डिफेन्सिफ भयो?, यसलाई लगेर प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भएछ त्यसकारण यसो भन्यो भन्न मिल्छ? ‘पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुस् न त्यति मानिदिनुस् न भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै चान्स छ? कुनै सम्भावना छ प्रधानमन्त्री हुने? एकभन्दा पनि तल तल प्रतिशत छैन उहाँहरूको सम्भावना। लडाइँ जित्नुभयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्छ। खोज्दै हिँडेर अन्तिममा मैकहाँ आइपुग्न बेर लगाउनुहुन्न।’
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको ७०औं जन्मदिनपनि मनाईएको थियो । बैठकमा सहभागी युवाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केक काटेर खुवाएका थिए । नेता महेश बस्नेतले केक खुवाएका थिए ।